Soomaliya – Page 33 – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
Degdeg:- Ahlusunna “Villa Somalia waxay doonaysaa baarlamaanka cusub in lagu soo daro Alshabaab”.
August 23, 2019 marqaan 0
Ahlu-suna waljameeca ayaa warsaxafadeed ay Soo saareen Waxaa ay eedayn ugu jeediyeen Xukumada Soomaaliya oo ay sheegeen in ay baalmartay heshiisyadii ay la galeen iyagoo aad u dhaliilay shirka dib u heshiista Galmudug iyo Gudiga […]
Seeraar:- “Jubbaland waxay ubaahan tahay hogaamiye aniga oo kale ah”.
August 23, 2019 marqaan 2
Cabdinaasir Seeraar Maax ayaa manta sheegay in isaga loo “doortay madaxweynaha maamulka Jubbaland.” Seeraar wuxuu ka mid ahaa musharrixiintii mucaaradka ee isku magacaabay “isbedel doonka” kuwaas oo hadda u muuqdo in ay kala jabeen. “Waxay […]
Daawo:- Ciidan ka amarqaata Axmed madoobe oo rasaas kufuray dad ku banaanbaxaay Ceelwaaq + Dhimasho iyo dhaawacyo.
Sargaal ka tirsan Ciidanka jubbaland ee Ceelwaaq ayaa dadka degaanka isugu yeeray saaka si ay u taageeraan doorashada Axmed Madoobe. Balse dadki markii ay goobta la isugu yeeray tageen ayey diideen dalabka ninkaas Taliyaha ah […]
Kenya oo Hambalyo udirtay madaxwayne ay ku abuuratay Kismaayo + Fariin ku wajahan DF Somalia.
Dowladda Kenya ayaa u hambalyeysay dib u doorashada Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe), iyadoo arrintan ay si dhow u muujineyso galaangalka weyn ee ay ku leedahay arrimaha Jubbaland. Dowladda Kenya ayaa ugu baaqday […]
Faahfaahin:- Cabdinaasir Seeraar yaa kula tartamay doorashada uu ku guuleystay ee ka dhacday Kismaayo?.
August 23, 2019 marqaan 1
Kismaayo maanta waxaa lagu doortay madaxweynhii sadexaad waxaan noqday Cabdinaasir Seeraar Codadkii la dhiibtay ayuu helay 65 cod Waxaan u tanaasulay laba musharax oo la tartamayey Magalada waxaa ka soconayo banaan baxyo lagu tagerayo madaxweynaha […]
Daawo:- Doorashadii Seeraar kadib Kismaayo waxaa isqabsaday rasaas dabaaldag ah.
Waxaa maanta markale magaalada kismaayo lagu doortay madaxwayne sedexaad oo ay yeelenayso jubbaland kaas oo loo doortay Cabdinaasir Seeraar Maax. Shalay kismaayo waxaa kadhacday laba doorasho oo lagu kala doortay Axmed madoobe iyo Cabdirashiid Xiddig, […]
Warbixin:- XILDHIBAANADA GOBOLKA BARI EE PUNTLAND MAXAA AFKA HAYSTA?.
Barlamaanka Beeleedka Puntland Gobolka Bari laga soo doorto, waxay u dhigmaan Barlamaanka Puntland saddex meelood meel 1/3, mana laha wax cod ah iyo tixgelin midna oo ku saabsan inay bulsho metelaan, waxaa la mid ah, […]
Sawiro:- Banaanbax lagu taageerayo sargaalkii iyo ciidankii kasoo goostay Somaliland oo kadhacay Badhan.
August 23, 2019 marqaan 3
Dowladda Puntland ayaa jimcaha saaka ah ku dhawaaqday in taliyihii ciidanka Somaliland ee aagga degmada Badhan G/sare Guray Cismaan Saalax iyo ciidankiisi ay si rasmiya ugu soo wareegeen ciidamada Puntland. Af-hayeenka madaxtooyada Puntland Jaamac Dabaraani […]
Swiro Degdeg:- Saldhigii Somaliland ee Badhan oo laga sudhay Calanka Puntland iyo ciidankii oo usoo ruqaansaday…
Ciidamadii ugu Danbeeyey ee Somaliland ujoogay Aaga Badhan ayaa markale goostay iyadoona Xeradoodii Calanka Puntland La suray. Gudaha saldhiga xilliga calanka la surayay waxaa goobjoog ahaa masuuliyiin dawlada Puntland kasocda iyo odayaasha dhaqanka deegaanka. Taliyihii […]
Shirkii Dhuusamareeb oo qarka usaaran in lagu kala dareero + Is fahamwaaga oo kordhay.
xogaha aynu ka helayno Magaalada Dhuusamareeb ee Caasimadda maamulka Galmudug ayaa waxa ay sheegayaan in Shirka dib u heshiisiinta maamulka Galmudug uu qarka u saaran yahay in uu fashilmo. Qaar ka mid ah Ergooyinkii tagay […]
DEG DEG: Taliyihii ciidamada Somaliland ee G Sanaag oo ku dhawaaqay war lama filaan ah & Hargeysa…
August 23, 2019 Ali Osman 1
Wararka naga soo gaaraya magaalada Badhan ee gobalka Sanaag ayaa sheegaya in ciidamadii ugu dambeeyey iyo saraakiishii Somaliland ugu magacownaa gobalka Badhan ay ka baxeen maamulkaas, ka dib markii ay soo baxeen arrimo badan. Magacyada […]
Degdeg:- Xukuumada Somalia oo Fahad yaasiin iyo saraakiil kale u magacaawday xilal cusub.
Shirkii golaha wasiirada Xukuumada somalia ee maanta ayaa lagu magacaabay taliyaal ciidan Kuwaas oo horay xilal kale oo ciidan uhayay. Taliyaha ciidanka Xoogga Dalka ayaa loo magacaabay Gen.Odawaa Yuusuf Raage oo horay u ahaa taliyaha […]
Puntland oo hambalyo udirtay Axmed Madoobe oo mar 3aad loo doortay madaxwaynaha Jubbaland.
Dowladda Puntland ayaa u hambalyeysay Madaxweynaha la doortay ee Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaan.
DEG DEG+DAAWO: Guusha Axmed Madoobe, Dagaalkii Nabad iyo Nolol xaggee ku dambeynayaan
August 22, 2019 Ali Osman 0
MUUQAAL DEG DEG:- Dil Toogasho oo Lagu Xukumay Ragii kufsaday Caaisha Ilyaas?.
Maxkamadda Sare ee Dowladda Puntland ayaa dil toogasho ah ku xukuntay Saddexdii xukmane ee loo heystay Kufsigii iyo dilkii Marxuumad Caasho ilyaas waxaana ay xukunnadoodii ku raacday Maxkamadda Derejada Kowaad iyo tan Rafcaanka oo hore […]
DEG DEG+DAAWO: RW Kheyre oo Hambalyo u diray Axmed Madoobe
Marqaan-NEWS ogaatay in mid kamid ah madaxda ugu sareysa dawladda Faderaalka ee Soomaaliya, uu hambalyo u diray Madaxweynaha cusub ee Jubbaland Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) oo ay goor dhaw doortee mudanayaasha baarlamaanka Jubbaland. Xogaha […]
Degdeg:- Mucaaradka oo ku dhawaaqay madaxwaynaha ay udoorteen jubbaland afarta sano ee soo socoto.
Cabdirashiid Xiddig ayaa ku guuleeystay doorashada madaxtinimada Jubbaland garabka Mucaaradka sida xildhibaanada garabkaasi ay xaqiijiyeen, Maadaama aysan saxaafaddu goobjoog ahayn. Sikimo ayaa udhaxaysay labada natiijo ee doorashooyinka Jubbaland. Faahfaahin filo
Madaxwayne Laftagareen oo markale eedeeyay DFS “Ciidna dhibaato ayay nagu hayaan”.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta-gareen ayaa ku eedeeyey ciidanka xooga Soomaaliya ee ku sugan KG inay waxyeelo ku hayaan dadka shacabka ah. “Ciidanka Guutada 8aad iyo kuwa 6aad iyo saraakiishooda waa kuwa ugu […]